Utshintsha njani umbala we-WhatsApp? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Utshintsha njani umbala we-WhatsApp?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 289
Ndiyabulela kwinto yokuba i-WhatsApp sisicelo esitsha kwaye esetyenziswa kakhulu sokuthumela imiyalezo kwangoko, ayinakuwutyeshela amathuba okwenziwa ngabasebenzisi bayo.
Ukuba sithelekisa uguqulelo olusemthethweni lweWhatsApp kunye ne "WhatsApp Plus" engabhalwanga ngokusemthethweni, inqanaba lokwenza ngokwezifiso liphantsi kwaye lithembele ngakumbi kuhlobo olungekho sesikweni. Kodwa oku akuthethi ukuba awukwazi yenza utshintsho oluthile kuWhatsApp ezisetyenziswa rhoqo ngabantu abaninzi.
Ngale ndlela, ungathanda ukutshintsha umbala oluhlaza u-WhatsApp anawo komnye umbala okhoyo? Kulabo abangazaziyo iimfihlo ezinesi sicelo, namhlanje siza kukucacisela ukuba ungayenza njani tshintsha umbala we-WhatsApp yakho.
Amanyathelo okutshintsha umbala we-WhatsApp kwiselfowuni yakho
Guqula umbala we-WhatsApp kwi-iPhone
Ukuze ukwazi ukuyenza ukusuka kwi-iPhone, kuya kufuneka ube neselfowuni enenkqubo yokusebenza ye-IOS 9 okanye engaphezulu. Ngendlela efanayo, kuya kufuneka ulungiselele iselfowuni yakho ngendlela yokuba isebenze ngokuqhekeka kwejele, yinto efana nale une-Android eyenziwe yasebenza.
Enkosi kulungelelwaniso lwenkqubo, imisebenzi ethile inokusebenza enokuthi, ngokubanzi, ingasebenzi okanye ifumaneke kumsebenzisi. Nje ukuba uhlangabeze ezi mfuno, kuya kufuneka wenze oku kulandelayo:
Yiya kwiVenkile ye App kwaye ukhuphele iiWAColors. Ukuba awunayo i-jailbreak, akunakwenzeka ukuba uyifake kwi-iPhone yakho.
Nje ukuba uyifakele kwaye uya kuba nayo, uya kuqaphela ukuba ungaqwalasela umbala webar yokukhangela, kunye nombala wamaqhosha kunye nombala weefowuni. Ewe kunjalo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba oloqwalaselo luya kufumaneka kuphela ku-WhatsApp.
Emva kokuba ugqibile ngoqwalaselo lwakho, kuya kufuneka uye kwiakhawunti yakho ye-WhatsApp kwaye jonga utshintsho olwenziwe.
Guqula umbala weWhatsApp kwi-Android
Ngokubhekisele kwizixhobo ze-Android, umbuzo utshintsha kancinci kuba awukwazi ukusebenzisa usetyenziso olufanayo ebesilukhankanyile umzuzwana odlulileyo. Kule meko, kuya kufuneka wenze ukhuphelo. Ngale ndlela, uya kuthintela konke ukuphazamiseka okunokwenzeka kwaye idatha kunye nolwazi luya kugcinwa.
Ukuze ukwazi tshintsha umbala we-WhatsApp kwi-Android, kuneke u:
Kuqala kufuneka ukhuphele usetyenziso lweYoMods. Sincoma ukuba uyenze kwikhompyuter kwaye uyikhangele kwifomathi ye-APK.
Emva kokuba ukufakwa kwesicelo kugqityiwe, kuya kufuneka uye kuseto lwesixhobo. Apho uya kubona zonke iisetingi ezikhoyo. Apho unezicwangciso ezifanelekileyo.
Emva koko yiya kwifayile ye- Useto lwewhatsapp ukuze ubone ukuba zeziphi izihloko onazo ngoku. Kufuneka ucofe nje ukufaka kwaye yiyo loo nto.
Ukuba ulandela yonke le nkqubo, uya kuba nakho ukukhuphela nawuphi na umxholo oyifunayo kwaye uyifake kwi-WhatsApp yakho.
1 Amanyathelo okutshintsha umbala we-WhatsApp kwiselfowuni yakho
1.1 Guqula umbala we-WhatsApp kwi-iPhone
1.2 Guqula umbala weWhatsApp kwi-Android
Meyi 6, 2021
Utshintsha njani umbala we-Facebook?
Ungalutshintsha njani ulwimi kuFacebook?